mardi, 03 mai 2016 08:41
Sambava : Tsy hay tohaina ny halatra lavanila
Sefo Fokontany lefitra nahatratrarana lavanila iray baoritra ny sabotsy maraina teo tao amin'ny Fokontany Ambodiampana Androranga-Sambava.
dimanche, 01 mai 2016 21:59
Antsohihy: Zaza kambana tsy fantan-dreniny ny rainy
Tovovavy iray niteraka kambana nipetraka amoron-dalana noho ny arerahina. Niasa tamin'ny toerana fandraisam-bahiny izy, ka tany no naha bevoka kambana azy, nefa tsy fantany izay rain-janany.
samedi, 30 avril 2016 14:46
Sary Sobika Sakaraha
Sakaraha: Efa 3 herin'andro no tsy misy jiro sy rano ara-dàlana
Ao antananan'ny safira, anisan'ny manakarena indrindra eto Madagasikara, nefa dia farany mahantra ny mponina satria dia na rano madio aza tsy misy, ny jiro omen'ny Jirama dia zara raha mandeha satria dia tapaka efa ho adiny 10 isan'andro, indrindra tato anatin'ny telo herin'andro izay.
jeudi, 28 avril 2016 20:58
Vohimasy-Farafangana : Manohitra ny hametrahana PDS
Miakatra ny feo any Vohimasy, Kaominina fihavian’ny praiminisitra teo aloha Ravelonarivo Jean any Farafangana taorian’ny nanoloan’ny ministeran'ny Atitany ho Filohan'ny delegasiôna manokana (PDS) ny Ben'ny tanàna lanim-bahoaka tao Vohimasy, Atoa Richard. Avy amin'ny antoko Leader Fanilo ity farany ary voafidy tamin'ny salanisa 41,30% nanoloana ny kandidàn'ny antoko HVM (30,63%) sy ny Arema (28,07%).
jeudi, 28 avril 2016 20:52
Oniversiten’i Toamasina : Napetraka ny Filoha sy ireo Sojabe
Lanonana roa sosona no tontosa tao Barikadimy androany alakamisy 28 aprily dia ny nametrahana tamin’ny toerany ny filohan’ny oniversite Dr Velo Jérôme sy ireo Sojaben’ny lalampiofanana samihafa misy ao amin’ny oniversiten’i Toamasina.